Uhlaziyo lweWork Ukunceda Ootitshala Nabafundi | Ndisuka mac
Uhlaziyo lweWork Ukunceda Ootitshala Nabafundi
UToni Cortes | 02/06/2021 14:00 | Iinkqubo zeMac
I-Apple isebenze ixesha elide kwaye icinga ngendlela izixhobo zayo ezinokuba luncedo ngayo bafundi y titshala. Uyazi ukuba ukuba umfundi uqhela ukufunda kwimeko yeApple, uya kuba nomsebenzisi oqinisekisiweyo wexesha elizayo.
Inkampani ikholelwa njalo, kwaye njengoko ixesha lihamba, kuthatha amanyathelo ukunceda izikolo kunye neeyunivesithi zisebenze nezixhobo zeApple kangangoko, nokuba ziiMacs okanye iiPads. Igumbi lokulala Ndiyasebenza ukongeza nje amanqaku amatsha ukwenza ukuba kube lula kootitshala nakwabafundi ukuba basebenze namaPhepha, amanani, kunye neNkcazo.
I-Apple ikhupha uhlaziyo kwisuti yayo ye-iWork yesicelo seofisi, izisa izinto ezintsha kuyo amaphepha, INumeri y I sembeko. Uhlaziyo luzisa ukudityaniswa okutsha kwenkqubo yeApple's Schoolwork, amanqaku amatsha kwiNombolo, kunye nezinye izinto ezintsha.
Ezi zinto zintathu zezicelo zikhoyo kuhlobo lwe-11.1 lwe-macOS, i-iPadOS kunye ne-iOS. Masibone:
2 I sembeko
Ngoku unokwenza amakhonkco kumaphepha ewebhu, iidilesi ze-imeyile kunye neenombolo zefowuni kwizinto ezinje ngeemilo, imigca, imifanekiso, imizobo, okanye iibhokisi zombhalo.
Ootitshala basebenzisa i-app yesikolo ukwenza ii-asayinimenti kumaphepha ngoku banokubona inkqubela phambili yomfundi, kubandakanya ukubalwa kwamagama kunye nexesha elichithwe (i-iPad kunye ne-iPhone kuphela).
Ootitshala abasebenzisa i-app yesikolo ukwenza ii-asayinimenti kwi-Keynote ngoku bayabona inkqubela yomfundi, kubandakanya ukubalwa kwamagama kunye nexesha elichithwe.
Njengamaphepha, ngoku unokwenza amakhonkco kumaphepha ewebhu, iidilesi ze-imeyile, kunye neenombolo zefowuni kwizinto ezinje ngeemilo, imigca, imifanekiso, imifanekiso, okanye iibhokisi zombhalo.
Ootitshala basebenzisa i-app yesikolo ukwenza ii-asayinimenti kwiNombolo ngoku banokubona inkqubela phambili yomfundi, kubandakanya ukubalwa kwamagama kunye nexesha elichithwe (i-iPad kunye ne-iPhone kuphela).
Inkxaso yokusebenzisana kwiifom kwi ukwabelana ngeespredishithi (I-iPad kunye ne-iPhone kuphela).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Uhlaziyo lweWork Ukunceda Ootitshala Nabafundi
Jonga ujikeleze kwiimephu zeApple ufikelela kwizixeko ezithile zaseYurophu
Isitishi se-YouTube sika-YouTube sele silungele ukusasaza iWWDC 2021